Ejypta: Mitaky Eid lavitry ny fanorisorenana ara-nofo ny bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2018 4:48 GMT
Satria efa akaiky ny Eid Al Fitr (ny fiafaran'ny Ramadan), miomana indray hizaka fanorisorenana ara-nofo bebe kokoa amin'izay efa lasa fenitra mahasorena ny vehivavy ao Ejipta.
Nanatevin-daharana ny hery hiadiana amin'izany tranga izany ihany koa ireo bilaogera sy mpikatroka antserasera, mitaky fankalazana mahafinaritra sy lavitry ny fanorisorenana.
Nanomboka tamin'ny 25 Oktobra 2006 izany rehetra izany, rehefa nanatri-maso ny tranga fanorisorenana faobe tamin'ny andro voalohany tamin'ny Eid Al Adha (Courban Bairam) i Ejipta.
Anatin'io toe-javatra manokana io, SandMonkey nanoratra hoe:
Tahaka izao ity tantara ity ho an'ireo izay tsy nandre momba izany: Andro voalohany amin'ny Eid izany, ary misokatra ao an-tanàna ny sarimihetsika iray vaovao. Nitangorona ireo andian-dehilahy mba hiezaka hiditra, saingy feno ny toerana tao amin'ny fampisehoana, nanapa-kevitra izy ireo fa hanimba ny trano fampisehoana. Rehefa vitany izany, dia nanohy tamin'ilay sokajiana fa haromontana ara-nofo izy ireo. Nihazakazaka manodidina misambotra izay tovovavy hitany izy ireo, na Niqabi, na Hijabi na tsy misarom-boaly. Na Ejipitiana na vahiny. Eny fa na dia ireo bevohoka aza. Nosamboriny ireo, nampijaliany, niezaka nanaisotra ny akanjon'izy ireo ary nanolana azy ireo, teo imason'ny polisy, izay tsy niraika. Niezaka nanao izay vitany mba hiaro ireo tovovavy ny olona tsara fanahy tao afovoan-tanàna. Navelan'ireo tompona mpivarotra hiditra ao aminy ireo tovovavy ary nohidiana ny varavarana, raha niezaka mbola hiditra ireo andian'olona. Ampidirin'ireo mpamily fiarakaretsaka ao anaty fiara ireo tovovavy ary miezaka mamaky ny fitaratra sy misambotra ireo tovovavy ireo andian'olona. Fisavorovoroana maharikoriko feno fanorisorenena ara-nofo izay naharitra adiny dimy nanomboka tamin'ny 7:30 hariva ka hatramin'ny 12:30 maraina izany, ary nahatonga ahy te-handoa ny mieritreritra izany.
Hatramin'io andro io, lasa ampahany tsy tapaka amin'ny Eid Al Fitr sy Eid Al Adha any Ejipta ny fanorisorenana ara-nofo. Nanangana vondrona Facebook sy fanentanana antserasera mitaky Bairam lavitry ny herisetra ilay bilaogera Mohamed Hamdy;
Fantatry ny tanora tena Ejiptiana fa ny Andriamanitry ny Ramadany dia ilay Andriamanitra iray ihany amin'ny taona sisa; mahamenatra raha mivavaka, mifady hanina sy mivavaka amin'Andriamanitra mandritra ny iray volana ny tanorantsika, mangataka famelan-keloka mandra-pahatonga ny andro farany amin'ny Ramadany ary avy eo mamakivaky ny araben'i Kairo mba hanorisory vehivavy amin'ny andro voalohan'ny Bairam. Ity vondrona ity dia antso ho an'ny Bairam lavitry ny fanorisorenana ara-nofo. Avelao hivoatra amin'ny resadresaka tsara izany ary asao ny namantsika rehetra mba hitondra fanajana sy fiarovana eny amin'ny arabe.
Noresahana tao amin'ny tontolon'ny blaogy Ejyptiana ny fanentanana ary noresahana tao amin'ireto bilaogy manaraka ireto: Shaymaa El Gammal, Mahdy Mubarak, Meshmeshya, Ego, Maha, Woman, Osama Abdel Aal, sy Radio Horytna.
Bilaogera Ahmed El Sabbagh nisaona an'i Ejypta izay fantany, hoy izy:
Ny fanorisorenana ara-nofo dia nanjary fanatanjahantena izay mampitombo ny fahantrana amin'ny zava-misy efa mampalahelo iainantsika amin'izao fotoana izao aty Ejipta. Ry namako malala, fantatro fa tsy mamaky izay soratako ireo mpiherisetra ary angamba mety mifandraika amin'ny fanorisorenana an-tserasera ny fisian'izy ireo amin'ny aterineto. Mino koa aho fa tsy mpiherisetra ireo izay mamaky ireo andalana ireo amin'izao fotoana izao, izany no mahatonga ahy tsy hitory teny aminao ary maniry anao fotsiny mba hanao eid tsy misy fanorisorenana.
Mbola misaona an'i Ejypta niharan'ny fanorisorenana ara-nofo ny Ejiptiana taorian'ny tatitry ny Reuters farany indrindra momba ny fanorisorenana izay nanambara fa roa ampahatelon'ny lehilahy Ejiptiana no mampijaly vehivavy. Ankoatra izay, nambaran'ilay bilaogera niharan'ny fanorisorenena ara-nofo Asser Yasser ho andro hanoherana ny fanorisorenana ny 18 Aprily.